UTrump ukhetha umbulali wezindlovu waseZimbabwe esikhundleni esiphezulu | Scrolla Izindaba
UTrump ukhetha umbulali wezindlovu waseZimbabwe esikhundleni esiphezulu
UDonald Trump uyazi ubakhetha kanjani.
Esinye sezinqumo zakhe ezintsha zokuqinisa ukuphathwa kwamasosha aseMelika, ukufaka esikhundleni owake wabulala izindlovu ezimbili e-Zimbabwe ngesikhathi sohambo lokuzingela ngowezi-2014.
Ukaputeni uScott O’Grady uqokwe nguTrump ukuba ahole izindaba zokuphepha emhlabeni wonke e-Pentagon.
Ngowezi-2014 uO’Grady wafakaza kwi-Congress ngokulwa kanye nokuvinjelwa ngabaphathi bakaObama izindebe zezindlovu ezivela e-Zimbabwe nase-Tanzania.
Abaphathi babekhathazekile ngokwehla okukhulu kwenani lezindlovu kuwo womabili la mazwe.
Njengengxenye yobufakazi bakhe, uO’Grady wakhipha incwadi eqinisekisa irekhodi lakhe lokuzingela izindlovu. Incwadi ibalule ukuthi uO’Grady wabulala indlovu yokuqala mhla zi-11 kuNdasa kowezi-2014, kwathi eyesibili wayibulala mhla zingama-23 kuNdasa kowezi-2014.
UTrump ubelokhu efaka abantu esikhundleni sabantu asebekhulile ababona bengekho qotho ngokwanele kuye nasezinhlanganweni zakhe zokuphepha, yize ehlulwe ukhetho nguJoe Biden emasontweni amabili edlule.